Serbia: Fandrahonana ny mpanao gazetin’ny B92 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Desambra 2009 4:41 GMT
Ny Alakamisy 3 Desambra no nandefa ny fizaràna voalohan'ny “Insider”ny fahitalavitra B92, fanadihadiana momba ny hooligans ao Belgrade – ireo mpanohana ny tarika mpilalao baolina kitra Partizan, Red Star ary Rad.
Ho fampiharana ny lalàna momba ny fahalalahana amin'ny fakàm-baovao ho an'ny tombontsoan'ny daholobe, azon'ny “Insider” ny anaran'ireo lehiben'ireo hooligans sy ny heloka maro vitan'izy ireo, ary nilaza fa tsy misy na iray aza amin'ireo mpitarika ireo no voaheloka ara-pitsaràna.
Tao aorian'ny fandefasana, Brankica Stankovic, mpanao gazety sady mpanoratra ny “Insider”, dia nanomboka nahazo fandrahonana hentitra avy amin'ireo mpanohana tarika mpilalao baolina kitra ireo avy amin'ny alalan'ny Facebook. Mahaliana fa tsy nisy nanafina ny anarany ireo nandefa ny hafatra.
Ireto misy hafatra sasantsasany naverin'ny vohikala “U poverenju” navoaka:
1. Ranabavy, ianao dia manenjika ny olona sy ny lalao izay tsy dia manome lanja loatra ny fiainana. Izahay tsy mafia, tsy mpanao politika ary koa tsy mpanefoefo mpanao kolikoly! Miala tsiny aminao aho, hangirifiry mafy ianao.
2. Fanontaniana ho an'i Brankica: Afaka manao sorona ny ainao ho an'io hevitrao io ve ianao? Izahay afaka. Io no herinay. Tsy haharesy anay velively ianao.
3. Ianareo rehetra ao amin'ny B92 dia makorelin'ny mpitantana sy mpikarama an'ady daholo. Tokony hakatona haingana araka izay azo atao io B92 io.
4. Tokony ho vonoina izy ary hatolotra ireo olona ao amin'ny B92 ho haninin'izy ireo. Matesa ry makorelina!
5. Ry makorelina, tsy ho ela velona ianao!.. alaviro ny mpanohana ny baolina kitra
Nanohitra io fandrahonana io ireo mpitoraka blaogy Serbiana.
Ao amin'ny blaoginy, Jaksa Scekic nitanisa sasantsasany amin'ireo hafatra izay navoakan'ireo olona maro ho hitan'ny rehetra ny omalin'io ary nanoratra:
Tandidonin-doza i Brankica Stankovic, tandidonin-doza ny “Insider”, tandidonin-doza ny B92, tandidonin-doza ny asa maha-mpanao gazety azy , tandidonin-doza ihany koa ny firenena.
Ho lavo ve isika?
Tokony hasehontsika fa tsy matahotra azy ireo ny mpanao gazety, ny vahoaka ary ny Governemanta.
Fotoana izao hihetsehan'ny fikambanan'ny mpanao gazety. Tsy ampy intsony ireo fanambarana. Soratra maty ireny ary tsy afaka fotsiny hampitony ny fisainan'ny olona, na iza na iza.
Tokony hasehontsika fa mbola mahery noho izy ireo isika.
Nandinika ny anton'ireo fandrahonana sy ny faneren'ireo hooligans amin'ny ankapobeny ny mpitoraka blaogy Srdan Fuchs . Nanoratra ity izy:
[…] Na dia izany aza, manondro antony hafa ireo herisetra. Tondroin'izy ireo [ireo hooligans] dia ho tena antony lehibe mahatonga ny herisetra, ny fahakivina ara-tsosialy, fiainana tsy misy tanjony, ny fikorosiana midina “ambany” tsy ahitàna izay hevitra hoe ahoana no hatao mba hanovan-javatra. […]
Ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “manomboka ny alin'ny Crystal” [“Crystal night starts”], ny mpitoraka blaogy Strongman dia manondro olana lehibe eo amin'ny fiaraha-monina. Nanoratra izy:
Na ireo mpitandro ny filaminana, na ireo mpampanoa lalàna, na ireo mpitsara dia tsy misy afaka mamaha ny olanan'ny herisetra sy ny fanaovana heloka bevava eo amin'ny fiaraha-monina. Samy tompon'andraikitra daholo isika rehetra koa samia mizaka izay manjo antsika. Miatrika ny “na ity, na itsy” isika izao. Na izy ireo, na isika. […]
Araka ny vaovao tao amin'ny B92 tamin'ny 6 Desambra, dia niteny ny filoham-pirenen'i Serbia fa tsy manaiky ny herisetra ataon'ireo hooligans sy ireo mpanao heloka bevava mandrahona mpanao gazety manao ny asany ny fanjakana.
Niteny i Tadić fa nandray fepetra fiarovana ny fanjakana, ary nampiany fa handray andraikitra mifanaraka amin'ny lalàna ireo sampandraharaham-panjakana amin'ny fisamborana sy ny fitsaràna ireo izay mandrahona ny fiainan'ny hafa.
Hatramin'izao, tanora sivy no voasambotra. Eo anelanelan'ny 18 ka hatramin'ny 26 eo izy ireo.